सनसिटीमा कोभिड–१९ को परीक्षण : २९८ मा सङ्क्रमण देखिएन - Khabar Nepali
होमपेज / मुख्य समाचार / सनसिटीमा कोभिड–१९ को परीक्षण : २९८ मा सङ्क्रमण देखिएन
सनसिटीमा कोभिड–१९ को परीक्षण : २९८ मा सङ्क्रमण देखिएन
बुधबार, बैशाख ०३, २०७७	, शरद शर्मा, रासस
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेप्सीकोलास्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा रहेका २९८ जनाको परीक्षण गरेकोमा कसैमा पनि कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नभेटिएको जनाएको छ ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले अपार्टमेन्टमा बसेका दुईजनामा मङ्गलबार सङ्क्रमण देखिएपछि त्यहाँ अन्यलाई परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण नभेटिएको जानकारी दिनुभयो । बेलायतबाट आई अपार्टमेन्टमा बसेका दुईजनामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएको थियो । उहाँले ¥यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी)मा पोजेटिभ देखिएका एकजनाको रियल टाइम पोलिमरेज चेन्ज रियाक्शन (पिसिआर) परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण नदेखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रवक्ता डा देवकोटाले आरडिटी विधिबाट १४ जिल्लाबाहेक सबैमा शुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश नं १ मा सात, २ मा तीन, गण्डकी प्रदेशमा एक, ५ मा एक र कर्णाली प्रदेशमा दुई जिल्लाबाहेक सबैमा आरडिटी विधिबाट परीक्षण शुरु गरिएको छ । अहिलेसम्म १५ हजार आठ सयजनामा दुवै विधिबाट नमूना परीक्षण गरिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी पाँच हजार ६१४ क्वारेन्टाइन र ११७ जना आइसोलेशनमा रहेका छन् । मोबाइल एपबाट स्वयं मूल्याङ्कन गर्दा १३ जना रेड जोनमा परेको उहाँको भनाइ रहेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले १५ वटा समूह बनाएर सङ्क्रमितको नजीक रहेकाको परीक्षण गरिरहेको बताउनुभयो । सोही समूहले नै सङ्क्रमित व्यक्तिका नजीक रहेका व्यक्तिको कन्ट्याक ट्रेसिङ नाम, ठेगाना, यात्राको विवरण लिने उहाँले बताउनुभयो । “समूहबाट नै सङ्क्रमित रहेका नजीकका आफन्त, नातेदार र साथीभाइको कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गरिरहेका छाँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नजीक रहेकाको स्वाब लिने र अलि टाढा रहेकाको रगतबाट परीक्षण गरेका छौँ ।”
उहाँका अनुसार बाहिरबाट आएका मानिसको प्लेन चढेको ठाउँको दुई सिटसम्म अगाडि र पछाडि रहेका व्यक्तिमा पनि ट्रेसिङ गरेर परीक्षण गरिएको छ । उहाँले पिसिआरले १४ दिनभित्र सङ्क्रमणको भए÷नभएको पत्ता लगाउने र त्यसपछिको अवधिको परीक्षण आरडिटीले गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले १४ दिनपछि आरडिटीबाट गरिएको परीक्षणमा पोजेटिभ देखिए अन्यलाई सर्ने सम्भावना कम रहने बताउनुभयो ।
कुन सर्पको बिष लाग्छ, कुनको लाग्दैन ? ( भिडियो हेर्नुहोस् )
कहाँ बाट कसरी आयो यति धेरै सहयोग, सबिताको परिवारमा छायो मुस्कानको लहर (भिडियो सहित्)
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा योजना तर्जुमा सम्वन्धी छलफल
घिमिरे परिवारमा बज्रपात, घरका सदस्यहरुको अबस्था यस्तो ‘सबैले सकेको सहयोग गरौँ ।’
कपोल कल्पित र भ्रामक प्रचारको पछि नलाग्न ग्रामिण सुधारको आग्रह
हास्यब्याङ्गय टेलिश्रृंखला ‘खस खस’को भाग ३ हेर्दै मनोरन्जन लिनुहोला..! (भिडियो सहित्)
१.कुन सर्पको बिष लाग्छ, कुनको लाग्दैन ? ( भिडियो हेर्नुहोस् )
२.'फर्सीको जरा '- नेपाली साहित्यको एउटा सशक्त कविता !
३.दाइजो लिन नमान्ने बेहुलालाई एक लाखको पुस्तक उपहार !
४.घिमिरे परिवारमा बज्रपात, घरका सदस्यहरुको अबस्था यस्तो 'सबैले सकेको सहयोग गरौँ ।'
५.कालोपत्रे कार्यमा लापरवाही
६.गर्भवती हुदा महिलाले कस्ता खानेकुराहरु खानुपर्दछ ? जानिराखाैँ